I-US iyeke ukukhipha ama-visa kuzakhamizi zaseCambodia, e-Eritrea, eGuinea naseSierra Leone
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Indawo » I-US iyeke ukukhipha ama-visa kuzakhamizi zaseCambodia, e-Eritrea, eGuinea naseSierra Leone
UMnyango Wezwe wase-US uthe uzoyeka ukukhipha izinhlobo ezithile zama-visa ezakhamuzini zaseCambodia, e-Eritrea, eGuinea naseSierra Leone, ngenxa yokwenqaba kwabo ukubuyisa izakhamuzi ezazidingisiwe.
Le nqubomgomo entsha ibekwe ezintanjeni zoMnyango Wezwe nguNobhala Wombuso uRex Tillerson ngoLwesibili. Okhulumela uMnyango Wezwe uHeather Nauert ukuqinisekisile ukuthi imikhawulo ibibekiwe kuwo womane la mazwe kusukela ngoLwesithathu, ngokusho kwe-AP.
Le mingcele yaxoxwa okokuqala yizikhulu zase-US ngenyanga edlule, ngemuva kokuthi uMnyango Wezokuphepha Kwasekhaya uncome ukuthi uMnyango Wezwe uthathe izinyathelo kulezi zizwe ezine ngenxa yokwenqaba ukusebenzisana nenqubomgomo yezokufuduka yabaphathi bakaTrump.
Esimemezelweni sayo mayelana nezijeziso zama-visa, i-DHS ithe la mazwe amane awazange athembeke ekunikezeni izakhamuzi zawo amaphepha okuvakasha. Ngenxa yalesi sizathu, “i-ICE iphoqeleke ukuthi idedele eMelika cishe abantu abangu-2,137 831 baseGuinea nabangama-XNUMX baseSierra Leone, iningi labo linezinkolelo zobugebengu.”
I-DHS ithe cishe babalelwa ku-700 abantu base-Eritrea abahlala eMelika ngemiyalelo yokugcina yokususwa. Abantu abangaphezu kuka-1,900 baseCambodia nabo bangaphansi komyalelo wokugcina wokususwa, kulabo bantu abangu-1,412 banecala lokutholwa benecala.
Kubantu baseCambodia, imikhawulo emabhizinisini nakwezokuvakasha izothinta kuphela izikhulu zoNgqongqoshe bamazwe angaphandle ngesikhundla sokuba ngumqondisi-jikelele nangaphezulu, kanye nemindeni yabo.
Inxusa laseMelika e-Eritrea lizoyeka ukunikeza ama-Eritrea ama-visa amabhizinisi nezokuvakasha, “ngaphandle kokulinganiselwa,” kusho isitatimende.
Isizwe iGuinea esiseNtshonalanga Afrika sithi imikhawulo emisha emabhizinisini, ezokuvakasha kanye nama-visa abafundi izothinta izikhulu zikahulumeni kuphela kanye namalungu omndeni aseduzane.
"Sonke simangele ngesinqumo seziphathimandla zaseMelika ngesinqumo seziphathimandla zaseMelika kodwa ungqongqoshe wezangaphandle okwamanje uyasebenza ukuze isimo sibuyele kwesijwayelekile," kusho okhulumela uhulumeni waseGuinea uDamantang Albert Camara etshela iReuters.
ESierra Leone, ukuvinjelwa kwama-visa amabhizinisi nezokuvakasha kuzothinta umnyango wezangaphandle kanye nezikhulu zabokufika.
Ama-visa asevele enikiwe awathinteki yimithetho emisha.
Kunamanye amazwe ayishumi nambili, phakathi kwawo kubalwa iChina, iCuba, iVietnam, iLaos, i-Iran, iBurma, iMorocco neSouth Sudan, ebalwe njengamazwe ahlukene ngokwamukela abadingisiwe. Umthetho wesifundazwe uvumela uMnyango Wezwe ukuthi umise zonke noma izinhlobo ezithile zama-visa ukuthi anikezwe lezo zizwe.
Isigameko sakamuva kakhulu saba ngo-Okthoba 2016, lapho abaphathi baka-Obama beyeka ukukhipha ama-visa ezikhulwini zikahulumeni waseGambia nemindeni yabo, ngoba uhulumeni wayengabathathi ababuyiselwe eMelika eGambia.
Ukuxoxisana: UMqondisi weChengdu Municipal Tourism Bureau
I-IOC iklomelisa i-Paris 2024 Olympics, 2028 Olympics to Los Angeles
UBill Manje Uya Edeskini likaBiden Lokweseka Impilo...